Tag: ios | Martech Zone
Kudzokera kuSizzle: Sei E-Commerce Vatengesi Vanogona Kushandisa Kugadzira Kuti Kuwedzere Kudzoka
China, Kurume 3, 2022 China, Kurume 3, 2022 Paul Vana
Zvekuvanzika zveApple zvakachinja zvakanyanya maitiro e-e-commerce vatengesi vanoita mabasa avo. Mumwedzi kubva pakaburitswa, chikamu chidiki chete chevashandisi veIOS vakasarudza kupinda mukushambadzira. Zvinoenderana neazvino Chikumi update, vamwe 26% yepasi rose vashandisi veapp vakabvumira maapplication kuti avatevere paApple zvishandiso. Huwandu uhu hwaive hwakaderera zvakanyanya muUS nekungosvika gumi nematanhatu%. BhizinesiOfApps Pasina mvumo yakajeka yekutevera zviitiko zvemushandisi munzvimbo dzese dzedhijitari, dzakawanda
QR Code Builder: Maitiro Ekugadzira uye Kugadzirisa Akanaka QR Makodhi eDhijitari kana Dhinda
Chipiri, Kurume 1, 2022 Chipiri, Kurume 1, 2022 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vedu ane runyorwa rwevatengi vanopfuura 100,000 vavakaendesa kwavari asi vasina email kero yekutaurirana navo. Takakwanisa kuita email append yakanyatsoenderana (nezita nekero yekutumira) uye takatanga rwendo rwekugamuchira rwakabudirira. Vamwe 60,000 vatengi isu tiri kutumira postcard kwavari neruzivo rwavo rwekutanga chigadzirwa. Kufambisa basa remushandirapamwe, isu tiri kusanganisira
Sei Apple's Mail Yakavanzika Dziviriro (MPP) Inobata sei Email Kushambadzira?
Chipiri, February 15, 2022 Chipiri, February 15, 2022 Greg Kimball
Nekuburitswa kuchangoburwa kweIOS15, Apple yakapa vashandisi vayo email neMail Privacy Dziviriro (MPP), ichidzikamisa kushandiswa kwemapikseli ekutevera kuyera maitiro seakavhurika mareti, mashandisirwo emidziyo, uye nguva yekugara. MPP zvakare inovanza vashandisi 'IP kero, zvichiita kuti kutsvaga kwenzvimbo kuwedzere generic. Nepo kuunzwa kweMPP kungaite seshanduko uye kwakatonyanya kune vamwe, vamwe vakuru vebhokisi retsamba (MBPs), seGmail neYahoo, vanga vachishandisa masisitimu akafanana kwemakore.